मान्छेको छालाको रंग किन भिन्न भिन्नै हुन्छ ? | मान्छेको छालाको रंग किन भिन्न भिन्नै हुन्छ ? – हिपमत
काठमाडौं,१२ माघ:सबैको छालाको रंग एउटै भए कति जाति हुन्थ्यो होला हगि ? कम्तिमा छालाको रंगकै आधारमा मानिस–मानिस बीच भेदभाव त हुने थिएन होला । यो त मीठो कल्पनाको कुरा भयो, व्यवहारमा यस्तो सम्भव हुँदैन ।